Kuba ithiyori amathuba epheleleyo of pa
トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ Kuba ithiyori amathuba epheleleyo of pa
Wena ke, ukuba siqinisekisa ukuba hit enkulu pa ngaphakathi, ndicinga ukuba inkoliso abo wamxabela ngaphandle ukucinga kakhulu. umatshini pa, nto leyo ke efakiweyo elibe pa kukuthi, lotto jackpot kwi indlela iLotto efanayo sonke.
Le, baba kuxhomekeke iziganeko kushishino, umatshini pa ongavelisi ewe, ngokusebenzisa zonyanzelo ngentsebenziswano ngumbutho lokuhlola yonke umatshini pa, akayi kuba nako ukuthengisa. Kwaye sizimisele Lottery indlela yayo, ethetha izinto, nina indlela leloto of indlela okuba ngokupheleleyo. I
ngokwezibalo, kuthiwa izilingo ezizimeleyo. Ngokuba lotto jackpot e
pa, kukho indibano leyo ukuba lotto random ngokupheleleyo. Xa, a epheleleyo inkqubo epheleleyo rate okuba random, yintoni uhlobo scheme leloto nto ngokufutshane kungenisa.
nale ndlela linokuba epheleleyo, kanye ngexesha elinye-Lottery ezimeleyo, na indlela leloto alichatshazelwa yi iziphumo elidlulileyo kunye like. Kuyinto ubunzima ukuqonda kancinane, kodwa, umzekelo, kukho ibhola obomvu, kunye noblowu namhlophe.
ukuqala de ibhola angena, iibhola ezintathu lotto ezingeenxa encinane yi okuphumelela kancinane. Ukuba ebomvu Yeyona ibhola hit, ngomzuzu wajika umfanekiso iqulethe iibhola pa ukuba qala, misa okuphumelela, umcimbi uba hit enkulu ukuqinisekisa ukuba kukho ebomvu-ibhola yentsimi nganye.
Ke ukuba lo ibhola emhlophe apha, kodwa nina niya Kakade miss ukuba ufake kumhlathi Hit roulette, indlela amathuba ngokupheleleyo, kuba akukho iphenjelelwa iziphumo edlulileyo, abuyele Matamoto, lotto phantsi kweemeko ezifanayo lonke ixesha ukususela ekuqaleni kuliwa.
in a random ngokupheleleyo, uba uhlobo into i iLotto ozimeleyo kanye kanye, le nto loo ndlela okuba ngokupheleleyo. Ngoko ke, xa nithi isondlo, amaxesha 1000 Hama wax, 2000 amaxesha Hama Yanjengomthwebeba, kodwa akavuma ukuba uphendule kanye, ukuzoba imeko iyafana, kuya kuba kanye ukuba amathamsanqa.
kunjalo machine, oko Izama idibane neJekhpot okuba zabo. Ngoko ke, lo matshini ukuba ulandela ilahleko kukuzama ukuba Tirha hit. Leyo yeyona nto leyo kuthiwa ukuba nokulatyuza jackpot, leyo kuthiwa kakuhle ezitratweni.
elizayo ukuqikelela, ngokuba bawurhuqa jackpot, kodwa khangela indlela engcono capture kuwe, le ngxaki. Jonga iziphumo ze elidluleyo lokuphila jackpot, uya kukwazi ukubona iliza enamandla engonwabanga, kodwa ilotto jackpot kuphela oluqhutywa phaya kunini na.
wada iingqameko phantsi kwezinye ubungakanani kwexesha, ngokuqinisekileyo, isibakala sokuba win xa aim eli xesha, Ngubani kwi ayikwazi ukuqikelelwa, kangangokuba loo nto pa nayo. Ekubeni
Hanemono na ivenkile ngaphantsi unayo i Horukon njengoko kumatshini CR, ungafuna ukwazi ukuba le yindlela iLotto ngokupheleleyo. Kwimeko kwiivenkile eziya zinokohluka amathuba le jackpot e Horukon, kodwa kukho nto ngokuqinisekileyo amathuba ngokupheleleyo, kodwa kufuneka kuneziphumo ezingaqhelekanga.